Walaac Laga Muujiyay Qorshe Xukuumaddu Laydhka Berbera Ugu Wareejinayso Shirkad Gaar Loo Leeyahay - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Walaac Laga Muujiyay Qorshe Xukuumaddu Laydhka Berbera Ugu Wareejinayso Shirkad Gaar Loo Leeyahay
Berbera(ANN)Shirkadda Berbera Power Service (BPS), ayaa walaac ka muujisay qorshe xukuumadda Somaliland shirkado gaar loo leeyahay ugu wareejinayso maamulka warshadda laydhka ee magaalada.
Guddoomiyaha Shirkadda BPS Mr. Cawil Nuur Cabdillaahi oo war-saxaafadeed ka soo saaray xafiiskiisa magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta, waxa uu sheegay in nidaam baalmarsan sharciga dalka u yaal loo bixiyey warshadda Laydhka Berbera, isagoo xusay in arrintaasi keenayso tayo-xumo ku timaada laydhka magaaladaasi oo ah mid xeeb ku taal.
War-saxaafadeedkaasi oo uu kaga warramay gurmad hore shirkadoodu ugu gashay laydhka Berbera iyo baaq uu u diray xukuumadda, waxa uu u qornaa sidan:-
“Waxaan wallaac ka qabaa tallaabada Xukuumadda ugu gacangelinayso wershadda Laydhka ee Berbera shirkad si gaar ah loo leeyahay maamusha wershaddaa.
Qaabka loo bixiyay maaha mid waafaqsan qaannuunka tartanka xalaasha ah iyo baahi loo eegay duuruufta Magaalada Berbera oo laydhkeedu ka duwanyahay magaalooyinka kale ee Somaliland, maadaama ay tahay magaalo-xeebeed.
Tartanka xalaasha ahi wuxuu keenayaa in shacabka reer Berbera helo laydhka ugu jaban, uguna tayada wanaagsan, laakiin go’aanka cid loo gaar yeelaa wuxuu majara-habaabiyaa hagaajinta iyo fayoobaanta danta shacabka.
Shirkaddayda Berbera Power Service (BPS) waa shirkaddii u gurmatay Berbera markii duruuf laydh la’aaneed soo foodsaartay sannadkii 2012, waqtigaas oo aannu degdeg u keenay laba mashiin oo waaweyn, iyadoo muddo laba sanno ah aannu si hafto ku qaadanaynay lacagtaas aannu sii bixinay, annagoo shacabka reer Berbera u danaynayna, mashiinnadaas oo ah kuwa ilaa hadda Berbera u baxa, lacagtoodiina aanu ilaa imika wax ku sii leenahay xukuumadda.
Waxa fajacsio nagu noqotay go’aanka degdeg ah ee cid loogu gaar yeelayo gacan-ku-haynta iyo maamulka wershadda laydhka ee Berbera,xukuumadda Somaliland-na, waxaan u soo jeedinaynaa in tartan xalaala la qabto oo loo dhanyahay.” Ayaa lagu yidhi qoraalkaa.